“Waxaan isku qanciyay inay run u dhawdahay dalkeena nimcaa fadhidadii, kol haddii labo labo mushar la qaadanayo…” Asma Abdirahman |
“Waxaan isku qanciyay inay run u dhawdahay dalkeena nimcaa fadhidadii, kol haddii labo labo mushar la qaadanayo…” Asma Abdirahman
Maqaalkan kooban ayaa waxaan ku wargalinayaa shacabka reer Somaliland ee shaqo la,aantu biyo dhigtay iyo masuuliyiin labo labo mushar ka qaata xukuumada oo xuurtaystay boosaskii shaqo ee dhalinyarta lagu shaqaalaysiin lahaa. Waxaan ka warheley dhawaan in maayar ku xigeenka degmada Togwajaale uu hore u ahaan jiray isku-duwaha wasaarada warshadaha Somaliland, halkaasi oo uu ku qaadan jiray mushahar iyo guno. Maayar ku xigeenkaasi markii loo magacaabay xilkan danbe ayuu wasaaradii uu hore uga gunaysnaa ka codsaday bedel, wasaaraduna way u ogolaatay. Waxaan kala garan waayay in wasaaradu booskan ay u baahnayd iyo inaanay u baahnayn waayo markii miisaaniyada ay wasaaradu codsanaysay waxaa ugu jira booskan isku duwaha gobolka Gabiley oo ay u baahnaayeen inuu Gabiley uga shaqeeyo, waana loogu daray miisaaniyada wasaarada warshadaha booskaasi musharkiisii.
Marka masuulka la magacaabo wuxuu musharka ku leeyahay booska cusub ee loo magacaabay iyo haayada dawladeed ee loo magacaabay halka booskiisii hore uuxaq u leeyahay inuu qaato ka cusub ee u bedelay haayada dawladeed ee uu ka tagay ka hore. Qofka shaqaale dawladeeda Waxa inuu xishoodo ay tahay waa inuu u yimaado dhaqaale urursi, sida arintan Maayar ku xigeenka degmada Togwajaale oo musharka ka qaata wasaarada arimaha gudaha iyo Dawlada Hoose ee degmada Togwajaale. Waxaan is idhi malaha wadanka dawlad ilaalisa hantida dalka oo cadaalad samaysaa ma jirto markaan arkay tuugooyinka cadcad ee sidan oo kale ahi ka dhex dhacayaan. Qof kastana waa su,aal uu iswaydiin lahaa hadduu la kulmo.
Waxaa inta badan dhacda in qofka haayad u shaqo taga ama dhintaba ay xisaabiyayaasha wasaaradaha iyo qofkii shaqo tagay ay ka heshiiyaan oo musharkii aanay wasaarada ka joojin ama aanay ku bedelin qofka cusub ee adeegii qabanaya. Waxaa dhacda inu qofka cusub ee belea shaqaale hore ay mushar la,aani ku dhacdo mudo dheer maadaama musharkii loo bedelay qofkii hore ee tegay ama uu qaatoba isagoon meelna ka shaqayn.
Xukuumada Somaliland waxaan ka codsanayaa inay arimahan iyo arimo kale oo faro badan hoos u eegto oo saxdo khaladaadka ay sameeyaan masuuliyiinta xilalka ka haysa, waana in masuul kasta oo lagu qabto musuqmaasuq la ciqaab mariyaa, oo la xidhaa ama la ganaaxaa shaqadana laga eryaa, haddii kale waxay horseedaysaa in cadaalad darro badan iyo dulmi ka dhex dhoco xukuumada joogta markaa. Masuuliyiinta wasaarada arimaha gudaha ee u fududaynaya musuqmaasuqana waxaan kula talin lahaa in marka ay ogolaanayaan masuul ka hawlgalaya Dawlad Hoose oo dakhli soo saarta inay mushar kale u qoraan inay xaaraan tahay oo aakhiro iyo aduunba ay ku guban doonaan.
Guntii iyo gebogabadii waxaan maayar ku xigeenka Tog-wajaale usoo jeedin lahaa inuu is casilo maadaama uu ku kacay xatooyo qaran, wasiirka arimaha guduhuna hadduu ogaan kari waayay inuu shaqaalihiisa iyo meelaha ay ugu kala qoran yihiin ogaan kari waayay shaqada ha iska casilo si loo keeno mid hantida umada u ilaaliya si wanaagsan oo aanay u dhuuman karin tuugooyinka waa wayn ee noocan oo kale ahi.
Isma lihi cabashada dhalinyarta reer Somaliland ee jaamacadaha kasoo baxay ee xukuumadu hadh iyo habeenba warbaahinta ka leeyihiin waa in loo abuuraa shaqooyin iyo inay ogaan kari waayaan masuul dhan oo labo mushahar u xaadira bishii ilaahay keenaba, iyadoo la tahriibayo oo booska yar ee soo baxa ay kumanaan codsi isdul buuxinayaan. Waxaan isku qanciyay inay run u dhawdahay dalkeena nimcaa fadhidadii, kol haddii labo labo mushar la qaadanayo.
Dawalada Somaliland ha iska fasaxdo dhalinyarta bilaa camalka ah ee gidaarada iyo xaafadaha buux-dhaafiyay hadaanay ogayn cida u shaqaysa iyo cida aan shaqayn ee fadhiga ku qaadata musharooyinka. Haddaanay waxba ka qaban karayn waxaan kula talin lahaa inta bilaa camalka ah inay wasaaradaha iska shaqaalaysiiyaan oo mushar fadhiga ku qaataan. Xalka waxaan u arkaa in qof kasta oo dawlada u shaqeeyaa shaqo qabto haddii kale aan mushahar lasiin.